Inkonzo yabathengi | Uhlobo Rave
Ufuna uncedo ukukhetha ubungakanani bakho?
Nceda ujonge isikhokelo sethu sobukhulu apha.
Unombuzo malunga nento okanye iodolo yakho? Nceda uthumele i-imeyile ku shop@stylerave.com. Inkonzo yethu yabaThengi ivulekile ukususela ngoMvulo ukuya ngoLwesihlanu ukusuka nge-10 kuye kwi-6 pm EST. Umbuzo wakho uya kuphendulwa kwisithuba seeyure ezingama-24.
Ngoncedo olukhawulezileyo, ucofe + 1.516.808.8795.
Ingaba iVenkile yeRave Shop isekwe phi?
Ivenkile yethu ihleli eNew York kwaye zonke ii-odolo zikhutshwa kwindawo yethu yokugcina izinto ngaphakathi kweiyure ezingama-24 zeshishini.
Uyintoni umgaqo-nkqubo wokubuyiswa kwemali?
Sinikezela ngemveliso yokutshintshiselana ngemveliso kunye nokuthenga ngetyala kwimpahla ebuyisiweyo. Nangona kunjalo, ukuthengiswa okubuyisiweyo akufuneki kube kungasetyenziswanga, kwaye kufuneka kube kwimeko yayo yasekuqaleni nazo zonke iithegi, kubandakanywa nayiphi na i-hangtags eqhotyoshelweyo. Asizamkeli izinto esele zinxibile, zingcolisiwe okanye zinee-tag zentsusa.
Nceda uqaphele ukuba intlawulo yokuqala yokuhambisa / yokuphatha ayibuyiselwa.
Yakufika iphakheji yakho yokubuyisa, ikhredithi yesitolo iyakuqhutywa ngeentsuku ezi-2 ukuya kwezi-3 zomsebenzi. Uyakufumana i-imeyile eneenkcukacha zakho zevenkile xa sele imbuyekezo ivunyiwe.
Ezi mpahla zilandelayo azibuyiswa: Izinto zokugqibela zokuthengisa, iilinie / izihlobo, izinto zomzimba kunye nezixhobo.
Siyaziqhenya ngokufumana iziqwenga zomgangatho ngononophelo kwaye sivavanya ngokufanelekileyo into nganye ngaphambi kokuthumela ke ukufunyanwa kwento eyonakeleyo (i) yinto efumanekayo. Kwimeko engalindelekanga yokuba into yakho ifike yonakele okanye inesiphene, nceda unxibelelane nathi kwiiyure ezingama-48 ukusuka kumhla wokuhanjiswa. Siza kudinga ubungqina bomonakalo njengemifanekiso ebonisa umonakalo. Emva kokuvunywa, siya kubonelela ngelebheli yokubuyela. Le kuphela kwetyala apho sibuyisela indlela yentlawulo yokuqala.
Yintoni inkqubo yembuyekezo?
Onke amabango, kubandakanya imbuyiselo, kufuneka aqaliswe ngaphakathi kweentsuku ezintathu (3) zomhla wokuhanjiswa kweodolo. Nceda uqhakamshelane nathi nge-imeyile kule shop@stylerave.com ukuze ufumane inombolo yokugunyaziswa (RA) kunye nemiyalelo engaphezulu njengempahla ayiyi kwamkelwa ngaphandle kogunyaziso lwangaphambili.
Zonke ii-imeyile ezibuyisiweyo kufuneka zibandakanye inombolo yakho yoku-odola ukuze ubhekise kuyo.
Nceda ufake ikopi yoGunyaziso lwakho lokuBuya kwaye uqinisekise i-package yakho ngaphambi kokubuya. Qaphela ukuba umthengi unoxanduva lokubuyisa imali yokuhambisa.
Zonke izinto ezithengiswayo ezivunyiweyo kufuneka zithunyelwe ngaphakathi kwiintsuku ezimbini (2) zomsebenzi zokufumana ugunyaziso lokubuya.
IiMbasa zeZizwe ngeZizwe
Zonke ii-odolo zamazwe aphesheya kufuneka ukuba zibuyisile iposti ngaphambi kwexesha kwiintsuku ezisi-7 ukusuka kumhla wokufumana. Nayiphi na imbuyekezo yamazwe onke efunyenwe emva kweentsuku ezingama-45 ukusuka kumhla woku-oda ayiyi kwamkeleka.
Ukuze ufunde ngakumbi ngeVenkile yethu ekuI-Intanethi, Cofa apha.
Ukubona iimpendulo kuthumelo kunye nokuthumela ii-FAQs, Cofa apha.
Ilungile. Cwangcisa. Ivenkile!
Nxibelelana nathi kwi-Instagram